सभापति देउवाले दिएको यति ठुलो पद बालकृष्ण खाणद्वारा अस्वीकार, अब के होला ? ::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणले पार्टी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पद अस्वीकार गरेका छन् । उनले पदका लागि आफू योग्य पात्र नभएको बताए । यसअघि मंगलबार मात्रै कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले खाणलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका थिए ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आठौँ स्मृति दिवसका अवसरमा जिपी कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन खाण बुटबल पुगेका वेला देउवाले उनलाई टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गरेका थिए ।
कुराकानीका क्रममा खाणले प्रमुख सचेतक पदको जिम्मेवारी अरू नै नेतालाई दिन आग्रह गरे पनि देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा १३ को उपधारा ९१० बमोजिम खाणलाई नै नियुक्त
खाणलाइ प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेको निर्णय गर्नुअघि देउवाले आफूनिकट नेताहरूसँग कसलाई जिम्मेवारी दिने भनेर छलफल गरेका थिए । छलफलमा सबै नेताहरुले पार्टी रक्षात्मक अवस्थाको प्रतिपक्षमा रहेको वेलामा खाण नै उपयुक्त पात्र भएको सुझाब दिएपछि देउवाले खाणलाई नियुक्त गरेका थिए ।
देउवाले नियुक्त गरेको जानकारी पाएपछि खाणले बुटवलबाटै देउवालाई टेलिफोन गरी निर्णयमा पुर्नर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । नेपाल विद्यार्थी संघ र युवाहरूको संगठन तरुण दलको नेतृत्व सम्हालिसकेको तथा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा १८ वर्षदेखि निरन्तर काम गरेकाले संगठन सुदृढीकरणको जिम्मेवारी आफ्नालाई उपयुक्त हुने खाणको भनाइ छ ।
‘म राजनीतिमा लागेपछि नै संगठन निर्माण र परिचालनमा रुचि भएको व्यक्ति हुँ’ खाणले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘०४६ सालको जनआन्दोलनका वेला नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति र ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा पार्टीले पराजय व्यहोरेपछि तरुण दलको अध्यक्ष बनेर पार्टीको पक्षमा माहोल ल्याएको छु ,’ उनले भने,
‘त्यसपछि १८ वर्षसम्म निरन्तर केन्द्रीय समितिमा काम गरेकाले संगठन निर्माण नै मेरा लागि उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ सभापतिलाई भेटेर संगठन निर्माण र परिचालनको जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्छु ।’ देउवाले २१ फागुनमा दलको नेतामा निर्वाचित भएलगत्तै खाणलाई प्रमुख सचेतक बनाउने भन्दै जिम्मेवारी लिन पटक–पटक आग्रह गरे पनि खाणले अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
एमालेबाट भानुभक्त ढकालको सम्भावना
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भानुभक्त ढकाललाई प्रमुख सचेतक बन्न आग्रह गरेका छन् । यसअघि पनि ढकालले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सम्हालेकाले पुनः ओलीले प्रमुख सचेक बन्न आग्रह गरेको एमालेका एक नेताले बताए । तर, ढकालले आफूले यसअघि प्रमुख सचेतक भइसकेकाले नयाँ सांसदलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा उपयुक्त हुने बताएका छन् । त्यस्तै, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ संसदीय दलको उपनेता हुने सम्भावना बढेको एमालेका एक नेताले बताए । राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतकमा खिमलाल भट्टराई हुने निश्चितजस्तै देखिएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सचिवालयले जनाएको छ । ओलीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई र सचेतकमा पर्शुमेघी गुरुङलाई बनाउने भद्र सहमति गरेको ती नेताले बताए ।
माओवादीको प्रमुख सचेतकमा शर्माको दाबी
माओवादीबाट राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतकमा दिनानाथ शर्माको नाम चर्चामा छ । शर्माले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी गरेका थिए । तर, माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमालेलाई दिएपछि शर्मा पछाडि हटेका थिए । माओवादीबाट राष्ट्रिय सभामा १२ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख सचेतकमा देवप्रसाद गुरुङलाई चयन गरिसकेको छ । माओवादीले उपनेता कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै रहेको सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए ।
फोरम र राजपा अलमलमा
संघीय समाजवादी फोरमको संसदीय दलको नेता उपेन्द्र यादव चयन भइसकेका छन् । पार्टी स्रोतका अनुसार मन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका आकांक्षीहरूमध्येबाट नै सचेतक र प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्ने पार्टीको रणनीति छ । प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको कार्यालयको जिम्मेवारी बाँडफाँडपछि मात्रै राष्ट्रिय सभाबारे छलफल हुने फोरमका नेताको भनाइ छ ।
राजपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । अध्यक्षमण्डलको संयोजकसमेत रहेका महन्थ ठाकुर र अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोमध्येबाट एकजना संसदीय दलको नेता चयन हुने अनुमान गरिएको छ । संसदीय दलका नेताको चयन भइसकेपछि मात्रै उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकबारे छलफल हुने महासचिव केशव झाले जानकारी दिए । समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।